Macallin Maurizio Sarri oo soo gaaray Turin oo lagu soo bandhigayo ka hor inta uusan Cristiano Ronaldo ku booqan Giriigga… + SAWIRRO – Gool FM
(Turin) 19 Juunyo 2019. Macallinka cusub ee kooxda kubadda cagta Juventus, Maurizio Sarri ayaa soo caga-dhigtay Magaalada Turin, waxaana warbaahinta iyo Taageerayaasha loo soo bandhigi doonaa berrito, kaddibna waxaa uu dalka Giriigga ku booqan doonaa Cristiano Ronaldo.
Tababarihii hore ee kooxaha Empoli, Napoli iyo Chelsea ayaa gelinkii dambe ee maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha Caselle Airport, waxaana loo qaaday Hoteelkiisa.
Sarri ayaa Shir jaraa’id qaban doona berri subax oo Khamiis ah marka ay saacadda gudaha Talyaanigu tahay 11:00 barqanimo oo ku aaddan 10:00 subaxnnimo xilliga UK.
Sida uu warinayo Warsidaha Sport Italia Sarri ayaa kaddib u safri doona Giriigga halkaasoo uu horraanta todobaadka soo socda fool ka fool ugula kulmi doono Cristiano Ronaldo, kaasoo ku jira fasaxiisa xagaaga.
Tababarahan reer Talyaani ayaa qandaraas ku eg bisha June sanadka 2022 u saxiixay Juve waxaana uu shaqadan kala wareegay Max Allegri.
Group-ka D ee Koobka Adduunka Dumarka 2019 oo la soo gaba-gabeeyay… + SAWIRRO